Ụmụ Anụmanụ | Ihe Baịbụl Kwuru
Teta! | Mee 2015
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
IHE BAỊBỤL KWURU
O nweghị onye nọ n’ụwa ga-asị na ụmụ anụmanụ abaraghị ya uru. Ànyị ga-aza Chineke ajụjụ gbasara otú anyị si na-emeso ụmụ anụmanụ?
Olee otú ụmụ mmadụ kwesịrị isi na-emeso ụmụ anụmanụ?
IHE NDỊ MMADỤ NA-EKWU
Ụfọdụ ndị na-ekwu na anyị nwere ike ime ụmụ anụmanụ ihe ọ bụla anyị chọrọ. Ndị ọzọ ana-ekwu na anyị kwesịrị ịna-emeso ụmụ anụmanụ otú anyị si emeso mmadụ ibe anyị.
Otu nwoke na-ahụ na a naghị arụsa ụmụ anụmanụ arụrụala kwuru na e kwesịghị ịna-eji ha akpa ego ma ọ bụkwanụ na-eme ha ihe ọ bụla masịrị anyị.
E nwere otu nwaanyị aha ya bụ Leona Helmsley. Nwaanyị a nwere ezigbo ego. Mgbe ọ na-ede otú a ga-esi kee akụnụba ya ma ọ nwụọ, o kwuru ka e jiri ihe karịrị ijeri naịra abụọ na-elekọta nkịta ya, kwuokwa ka e lie nkịta ahụ n’akụkụ ili ya ma ọ nwụọ.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee otú i chere anyị kwesịrị isi na-emeso ụmụ anụmanụ?
Jehova Chineke bụ́ Onye kere ihe niile kwuru na azụ̀ ndị dị n’oké osimiri, anụ ufe nke eluigwe na ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ nke na-agagharị n’elu ala ga-anọ n’okpuru ụmụ mmadụ. (Jenesis 1:28) N’ihi ya, o doro anya na Chineke kere ụmụ anụmanụ ka ha nọrọ n’okpuru ụmụ mmadụ.
Ihe Baịbụl kwuru tupu ya ekwuo ihe ahụ dị na Jenesis 1:28 gosikwara na ụmụ anụmanụ ga-anọ n’okpuru ụmụ mmadụ. Baịbụl kwuru, sị: “Chineke wee kee mmadụ n’onyinyo ya, ọ bụ n’onyinyo Chineke ka o kere ya; nwoke na nwaanyị ka o kere ha.”—Jenesis 1:27.
Otú Chineke si kee anyị pụrụ iche n’ihi na o kere anyị “n’onyinyo ya.” Ihe ọ pụtara bụ na o kere anyị ka anyị nwee amamihe, hụ ndị ọzọ n’anya ma na-ekpe ikpe ziri ezi ka yanwa. O kekwara anyị otú ọ ga na-agụ anyị agụụ ife ya, nweekwa ike ịmata ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi. Ụmụ anụmanụ agaghị emeli ihe ndị a n’ihi na Chineke ekeghị ha “n’onyinyo ya.” E kere ha ka ha nọrọ n’okpuru ụmụ mmadụ, ọ bụghị ka a na-emeso ha otú e si emeso ụmụ mmadụ.
Ọ̀ pụtaranụ na ụmụ mmadụ ga na-arụsa ụmụ anụmanụ arụrụala? Mba.
N’Iwu Chineke nyere ụmụ Izrel, o kwuru ka a na-enye ụmụ anụmanụ nri nakwa na o nwere mgbe a ga-ahapụ ndị nke e ji arụ ọrụ ka ha zuo ike. O kwukwara ka e nyere ha aka ma ha baa ná nsogbu nakwa ka a ghara ikwe ka ha merụọ ahụ́.—Ọpụpụ 23:4, 5; Diuterọnọmi 22:10; 25:4.
“Ụbọchị isii ka ị ga-arụ ọrụ gị; ma n’ụbọchị nke asaa, arụla ọrụ, ka ehi gị na ịnyịnya ibu gị wee zuo ike, ka nwa ohu gị nwaanyị na onye mbịarambịa wee nweta ume.”—Ọpụpụ 23:12.
Igbu ụmụ anụmanụ ọ̀ bụ ihe ọjọọ?
Ụfọdụ ndị na-agba nta na ndị na-akụ azụ̀ na-ama ụma gbuo anụmanụ ma ọ bụ azụ̀ ha na-achọghị iji mee ihe ọ bụla. Ịchụgharị ha na igbu ha na-atọ ha ụtọ. Ndị ọzọ kwetara ihe otu nwoke Rọshịa na-ede akwụkwọ kwuru. Aha nwoke ahụ bụ Leo Tolstoy. O kwuru na igbu ụmụ anụmanụ na iri ha bụ ihe ọjọọ.
Chineke kwuru na ụmụ mmadụ nwere ike igbu anụmanụ ma ọ bụrụ na ọ ga-emerụ ha ahụ́. E nwekwara ike igbu ha ma ọ bụrụ na a chọrọ iji ha nweta ihe a na-eyi eyi. (Ọpụpụ 21:28; Mak 1:6) Baịbụl kwukwara na anyị nwere ike igbu ụmụ anụmanụ rie. Jenesis 9:3 kwuru, sị: “Anụ ọ bụla na-agagharị agagharị nke dị ndụ pụrụ ịbụrụ unu ihe oriri.” Ihe ọzọ bụ na Jizọs nyeere ndị na-eso ụzọ ya aka, ha egbute azụ̀ ha riri.—Jọn 21:4-13.
Ma, Baịbụl kwuru na Chineke “kpọrọ onye ọ bụla nke hụrụ ime ihe ike n’anya asị.” (Abụ Ọma 11:5) N’ihi ya, o doro anya na Chineke achọghị ka anyị merụọ ụmụ anụmanụ ahụ́ ma ọ bụkwanụ mara ụma gbuo ha n’enweghị ihe anyị ji ha eme.
Ihe Baịbụl kwuru na-egosi na Chineke ejighị ndụ ụmụ anụmanụ egwu egwu.
Baịbụl kwuru na mgbe Chineke na-eke ihe, o mere “anụ ọhịa nke ụwa n’ụdị ya dị iche iche nakwa anụ ụlọ n’ụdị ya dị iche iche nakwa anụ ọ bụla ọzọ na-agagharị agagharị nke ala n’ụdị ya dị iche iche. Chineke wee hụ na ọ dị mma.”—Jenesis 1:25.
Baịbụl kwuru gbasara Jehova, sị: “Ọ na-enye anụmanụ ihe oriri ha.” (Abụ Ọma 147:9) Chineke kere ụwa otú ọ ga-eme ka ụmụ anụmanụ na-enweta nri ga-ezuru ha, hụkwa ebe ha ga-ebi.
Mgbe Eze Devid na-ekpe ekpere, ọ sịrị: “Jehova, ị na-azọpụta mmadụ na anụmanụ.” (Abụ Ọma 36:6) Dị ka ihe atụ, mgbe Jehova ji Iju Mmiri zuru ụwa ọnụ bibie ndị ajọ omume, o chebere mmadụ asatọ na ụdị anụmanụ dị iche iche.—Jenesis 6:19.
O doro anya na Jehova anaghị eji ụmụ anụmanụ egwu egwu. Ọ chọghịkwa ka ụmụ mmadụ na-arụsa ha arụrụala.
“Onye ezi omume na-elekọta mkpụrụ obi anụ ụlọ ya.”—Ilu 12:10.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ụmụ Anụmanụ
Ihe Baịbụl Kwuru Gbasara Ụmụ Anụmanụ
g 5/15 p. 14-15
ISIOKWU TETA! A Chineke Ọ̀ Dị? Gịnị Mere Anyị Ji Kwesị Ịma ma Ọ̀ Dị?
IHE NDỊ NA-EME N’ỤWA Akụkọ Gbasara Afrịka
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Otú Gị na Nne na Nna Di Gị ma Ọ Bụ Nne na Nna Nwunye Gị Ga-esi Na-adị n’Udo
IHE BAỊBỤL KWURU Ịgba Chaa Chaa
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Ihe Ị Ga-eme ma I Chee na Ndị Enyi Gị Na-agbara Gị Ọsọ
IHE BAỊBỤL KWURU Ụmụ Anụmanụ
È KERE YA EKE? Uru Afụ Ọnụ Nwamba Baara Ya
IHE NDỊ ỌZỌ ANYỊ NWERE
Gịnị Ka A Na-eme n’Ụlọ Nzukọ Alaeze?
Nke Isii: Na-asị Biko na I Meela
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere TETA! Chineke Ọ̀ Dị? Gịnị Mere Anyị Ji Kwesị Ịma ma Ọ̀ Dị?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Chineke Ọ̀ Dị? Gịnị Mere Anyị Ji Kwesị Ịma ma Ọ̀ Dị?
Chineke Ọ̀ Dị? Gịnị Mere Anyị Ji Kwesị Ịma ma Ọ̀ Dị?
TETA! Chineke Ọ̀ Dị? Gịnị Mere Anyị Ji Kwesị Ịma ma Ọ̀ Dị?
Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. IHE NDỊ Ị GA-EME NA IHE NDỊ Ị NA-AGAGHỊ EME | IHE ANYỊ GA-EJI IHE Ị GWARA ANYỊ MEE